राजेन्द्र मगर – MySansar
Author: राजेन्द्र मगर
भर्खरै फिफा विश्वकप र एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनोटमा नेपालले नयाँ प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीको प्रशिक्षणमा राम्रो खेलेको भनेर तारिफ भयो । नेपाली फुटबल समर्थकको यो लागि खुशीको विषय बन्यो । यस्तैमा मंगलबार अर्को खुशीको विषय पनि आयो । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले नेपालको फिफा वरीयता सुधार भएको भन्दै एउटा स्कृनसट… Continue reading
कृष्ण रिमाल बावुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएपछि तत्कालीन राज्य संरचना अनुसार हरेक गा.वि.स हरुलाई २० लाख रुपैयाको दरले बजेट निकासा हुन थाल्यो। त्यस पछि गाँउ गाँउमा विकास भनेर धेरै नै नयाँ“ मोटरबाटोको निर्माण सुरु गरियो। यो काम आज पनि त्यो बेलाको भन्दा बढि अनुपातमा आजको राज्य संयन्त्रका गा.पा र न.पा हरुले गरिरहेका छन्। निश्चित रुपमा बाटो… Continue reading
उपचार पत्ता नलागेको अलजाइमर्स किन र कसरी हुन्छ ?
Posted on August 10, 2019 by राजेन्द्र मगर
अलजाइमर्स मस्तिष्क रोग हो। यो रोग विशेषगरि वृद्वृद्लाई देखिन्छ। उपचार पत्ता लागिनसकेको यो रोग लाग्नुको कारणको बारेमा अध्यन अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा यो रोग मेडिकल साईण्टिस्टहरुको टाउको दुखाई बनिरहेको छ।
भकभकाउने समस्या किन हुन्छ ? उपचार कसरी गर्ने ?
Posted on August 9, 2019 August 9, 2019 by राजेन्द्र मगर
तपाई सबै शब्दहरु शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाई नअकमकाईकन बोल्न सक्नुहुन्छ ? यदी नभकभकाईकन बोल्न सक्नुहुन्छ भने यो तपाईको अत्यन्तै सबल पक्ष हो। कतिपय मानिसहरु यस्ता पनि छन्, उनीहरु नभकभकाईक बोल्न सक्दैनन्। जसका कारण कतिप ठाउँमा उनीहरु हाँसोको पात्र बनिरहेका छन्। भकभकाउनु समस्या होइन् रोग हो।
अचानक मृत्यु अर्थात ‘सडन डेथ’ बाट कसरी जोगिने ?
Posted on August 8, 2019 August 8, 2019 by राजेन्द्र मगर
राती सकशुल रहेको मानिस बिहान उठ्दा मृत फेला परेको धेरै भेटिन्छ। अर्थात सुतेर बिचमा उठ्दा मानिस मरेको उदारणहरु धेरै छन्। किन र कसरी हुन्छ त यस्तो ?
फङ्गल इन्फेक्सन बाट कसरी जोगिने ?
Posted on August 5, 2019 August 11, 2019 by राजेन्द्र मगर
गर्मीमा छालाका विभिन्न समस्या देखिन्छन्। छालामा देखिने धेरै समस्यामध्ये फंगल इन्फेक्सन एक हो। गर्मीमा पसिना, वायुमा आर्द्रता बृद्धि अनि शरीर गुम्स्याउनाले फङ्गल इन्फेक्सन हुन्छ । यो एक प्रकारको ढुसी (फंगाई) को कारण हुन्छ। फंगल इन्फेक्सन हुँदा हात र खुट्टाको औँलाको बीचमा चिलाउने, रातो हुने र छाला उप्किएर छालामा टिकटिक सेतो छाला देखापर्ने, छालामा फोका उठ्ने,… Continue reading
Posted on August 4, 2019 August 4, 2019 by राजेन्द्र मगर
‘मुटु कसरी बिग्रन्छ ?’ यो प्रश्नमा अधिकाशं चिकित्सकहरुको जवाफ हुन्छ, ‘बदलिँदो जीवनशैली, खानपानको गलत छनौट र आवश्यकताभन्दा बढी मानशिक तनाव।’ यी र यस्तै कारणले मुटुसम्बन्धी रोगका बिरामीको संख्या विश्वमै बढ्दै गएको छ। नियमित शारीरिक व्यायाम नगर्दा पनि मुटु रोगले च्याप्छ भने धुमपान र अत्यधिक प्रदुषण मुटु रोगी बढ्नुको अर्को कारण हो। के हो मुटुरोगको लक्षण… Continue reading
स्तनपान गराउने आमाले ध्यान दिनु पर्ने कुराहरु
Posted on August 1, 2019 by राजेन्द्र मगर
आमाको दुध बच्चाका लागि अमृतसमान हुन्छ। हामीले सुन्दै आएको कुरा हो। आमाको दुध बच्चाका लागि त्यस्तो पोषण हो, जसले उनीहरुको शरीरिक-मानसिक विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ । यतिबेला धेरैको घरमा नयाँ सदस्य भित्रिएको होला। खासगरी पहिलो बच्चा जन्माएका आमाहरुले बच्चालाई स्तनपान गराउने बारेमा केहि कुरा जान्नैपर्छ। किनभने उनीहरु यसमा अभ्यस्त भइसकेका हुँदैनन्। स्तनपान गराउने आमाले ख्याल… Continue reading
पित्त नलीमा खराबी किन देखिन्छ ?
डा.कमल राज सुवेदी जण्डिस हुने थुप्रै कारणहरु मध्ये पित्त नलिमा अवरोध हुनु पनि एउटा प्रमुख कारण हो। साधारणतया पित्तरस कलेजोमा बन्छ। पित्तनलीको माध्यमबाट सानो आन्द्रामा जान्छ जसले खाएको खाना पचाउन मद्धत गर्छ। पित्त नलीमा अवरोध गराउने मुख्य दुई कारणहरु हुन्छन। १. पित्तनलीमा ढुङ्गाबन्ने वा पित्त थैलीको ढुङ्गा नलीमा जाने। २. पित्त नली साँघुरिने वा… Continue reading
डाक्टर राहुल पाठक विभिन्न संक्रमणका कारण कलेजोमा सुन्निने अवस्थालाई हेपाटाइटिस भनिन्छ। कलेजोमा ‘हेपाटोट्रोपिक भाइरस’ का कारण हुने संक्रमण नै हेपाटाइटिस हो । हेपाटाइटिसलाई ए देखि इ सम्म गरी पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। चिकित्सकका अनुसार तुलनात्मकरुपमा हेपाटाइटिस बी र हेपाटाइटिस सी गम्भीर मानिन्छन्। नेपालमा करिब चार लाख हेपाटाइटिसका बिरामी भएको अनुमान छ। सामान्यतया वाकवाक लाग्ने,… Continue reading
निद्रामा घुर्ने समस्या जसले, गराउँछ ‘हर्टयाट्याक’ देखि ‘प्यारालाइसिस’सम्म
Posted on July 29, 2019 by राजेन्द्र मगर
– डा० राजु पंगेनी, एम.डी, डी.एम के तपाईंलाई निद्रामा घुर्ने समस्या छ? के तपाईं सुतेको बेला सास रोकिएर उकुसमुकुस हुदै बारम्बार बिउझने गर्नुहुन्छ? के तपाईंलाई दिउसो धेरै निद्रा लाग्ने गर्छ? के तपाईंलाई निद्रामा हात-खुट्टा धेरै चलाउने, छट्पटिने समस्या छ? ‘यदि छ भने तपाईंलाई निद्रामा घुर्ने र सास रोकिने रोग ‘स्लिप एप्निया’ भएको हुन सक्छ।’ ‘स्लिप… Continue reading
वडा अध्यक्षदेखि मेयरसम्मका जनप्रतिनिधीले बाईक देखि गाडीसम्म खरिद गरिरहेको बेला कर्णालीका जनप्रतिनिधीले भने साइकल खरिद गरेका छन्। अन्य जनप्रतिनिधिहरु जनताको कर विलासी वस्तुमा खर्च गरिरहेको बेला कर्णालीका जनप्रतिनीधीहरुले फरक काम गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेशलाई स्वच्छ र प्रदुषण मुक्त बनाउनलाई साइकल चढ्ने अभियान सुरु गरेको कर्णालीका जनप्रतिनिधीहरुले बताएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई धुलो, धुवाँरहित… Continue reading
बाढीले वितण्डा : देउवाको आरोप : ‘सरकारले भन्दा बरु विदेशी एनजिओले काम गरेका छन्’
Posted on July 24, 2019 July 26, 2019 by राजेन्द्र मगर
‘नेपालले भारतलाई भारतले नेपाललाई दोष दिएर कति दिन चल्छ ? कुटनीतिक तरिकाले कुरा गरेर सदाका लागि समस्या समाधान गर्नुपर्छ। एकले अर्कोलाई गाली गरेर हुँदैन। घरविहीन भएकालाई खाद्यान्न लत्ताकपडा दिने र ओत दिने काम सरकारको हो। तर केही गरेको छैन। बरु विदेशी एनजिओले गरेका छन्।’ पुर्व प्रधामन्त्री शेर बहादुर देउवा तथा कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले… Continue reading
साउन १ गते गयो, ‘क्लिन फिड’ लागु भएन् !
Posted on July 23, 2019 August 13, 2019 by राजेन्द्र मगर
‘साउन १ गतेबाट ‘क्लिन फिड’ लागु गर्छौ’ सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले‍ ‘क्लिन फिड’को बारेमा यसरी बोल्नासाथ सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा ‘क्लिन फिड’ बहश छाएको थियो। केबुल व्यावसायीहरुले सरकारले लिएको क्लिन फिड नितीको विरोध गर्दै २४ घण्टा विदेशी च्यानल बन्द गराए। विदेशी टिभी च्यानल बन्द गर्ने केबुल व्यावसायीहरुको विरोधमा सिविआईमा उजुरी समेत… Continue reading
यतिबेला नेपाली फिल्म जगत दुई कुराले तातेको छ। पहिलो — नायिका शिल्पा र निर्माता छविको समबन्ध। दोस्रो — नायिक साम्राज्ञीको प्रेमीसँगको बोल्ड अवतार। के यी दुई विषय सर्वस्व छाडेर बहश गर्नुपर्ने विषय हो त ? एकथरीको तर्क हुनसक्छ, सेलिब्रेटी हुन्, उनीहरुको व्याक्तिगत जिवनको बारेमा चासो र चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। तर, यत्ति धेरै चर्चा ?… Continue reading
परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले मरणोपरान्त आफ्नो अंगदान गर्ने घोषणा गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा उनको चर्चा चौपट्टै चुलिएको छ। आजसम्म कसैले नगरेको काम गरेको झै उनको बारेमा प्रशंसाका शब्दहरु अनलाइन मिडिया तथा सोसल मिडियामा देखिएका छन्। उनको अत्यधिक चर्चा भइरहदाँ थाहा पाउनु पर्ने कुरा के हो भने नेपालको लागि अंगदान नयाँ विषय होइन्। ज्ञवालीअघि अंगदान गर्नेहरु धेरै… Continue reading
सरकार र विप्लव समुहको नेकपा माओवादीबीच वार्ता हुने चर्चा चलिरहेको बेला कैलालीको धनगडीमा बम विस्फोट भएको छ। विस्फोटमा परि ५ जना घाईते भएका छन्। धनगढी प्रहरीले घटनास्थलमा घटनास्थलमा ९ एमएममको चाइनीज पेस्तोल फेला परेको बताएको छ। विष्फोटमा विप्लव समूह संग्लग्न रहेको प्रहरीको आंकलन छ। गत महिना काठमाडौँमा भएको विस्फोटको जस्तै शैलीमा धनगढीमा पनि विस्फोट भएको हो।… Continue reading
श्रीमती हत्याको कारण के ? सालीसँगको सम्बन्ध कि १ करोड बीमाको लोभ ?
Posted on July 18, 2019 July 18, 2019 by राजेन्द्र मगर
‘पैसा सबथोक होइन तर भगवान भन्दा कम छैन’ पैसाको महिमालाई लिएर फिल्ममा यस्ता डाइलगहरु प्रसस्तै प्रयोग भएका हुन्छन्। समाजकै घटनालाई लिएर फिल्म बनाइन्छ। अर्थात, फिल्ममा देखाइएको दृश्य समाजमै घटिरहेका हुन्छन्। ‘क्राइम थ्रिलर’ फिल्मको ‘प्लट’ जस्तै डरलाग्दो घटना फेरि घटेको छ। घटना श्रीमती हत्याको हो। पोखराको रमेश नेपालीको श्रीमती लक्ष्मी नेपालीको चार महिना अघि जीवन बिमा… Continue reading
अभिनेत्री करिश्मा माननन्धरको फेसबुक पोस्टमा अभिनेता सरोज खनाललेआफ्नो फोटो सहित कमेण्ट गरेपछि सुरु भएको राष्ट्रिय अवार्डको विवादले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। राष्ट्रपति निवासमा भएको कार्यक्रममा अभिनेता खनालले ट्वाइलेटको कमोडमा बसेर खिचेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अवार्डले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको हो। अवार्ड विवादको सुरुवात अभिनेत्री करिश्मा मानन्धरको फेसबुक पोस्टबाट भएको थियो